အာကာသကိုမြင်ခဲ့တဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသားလေးများ၊ အချိန် ၈ နှစ်ကြာပြီးမှ ကင်မရာလက်ထဲသို့ပြန်‌ရောက် - JAPO Japanese News
အာကာသကိုမြင်ခဲ့တဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသားလေးများ၊ အချိန် ၈ နှစ်ကြာပြီးမှ ကင်မရာလက်ထဲသို့ပြန်‌ရောက်
သော 27 Nov 2020, 14:23 ညနေ
အမေရိကန်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ SpaceX က အာကာသစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ပထမဆုံးစတင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားပြီး နှစ်အနည်းငယ်။
နောက်ဆုံးတော့ လူလိုက်ပါလာတဲ့ယာဥ်မှာ ဂျပန်လူမျိုးအာကာသယာဥ်မှူးလည်းလိုက်ပါစီးနှင်းရပြီး နိုင်ငံတကာအာသာသအခြေစိုက်စခန်းဆီသို့ သွားရတဲ့ခေတ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် အမြင့်ဆုံးကိုပျံတက်မယ့်အာကာသယာဥ်နဲ့ လေယာဥ်ပျံအတွင်းပိုင်းကဲ့သို့ ယာဥ်ကိုယ်ထည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီး၊ လေယာဥ်ကွင်းကနေအာကာသကိုတိုက်ရိုက်သွားမယ့် အကူးအပြောင်းကာလကိုရောက်ဖို့ လက်တစ်ကမ်းအလိုလောက်သာ ကျန်ပါတော့တယ်။
အနာဂတ်မှာပိုပိုပြီး လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အာကာသဆီသွားနိုင်မယ့်ကာလကိုရောက်လာမယ် ဆိုတာကိုကြိုတင်ခံစားရပြီး စိတ်တွေလည်းလှုပ်ရှားနေပေမဲ့ ဒီလိုအာကာသသို့ခရီးနှင်မယ်ဆိုတဲ့အိပ်မက်ကို မိမိဘာသာစိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်လူမျိုးအထက်တန်းကျောင်းသားလေးတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၁ လပိုင်း ၁၈ ရက်နေ့၊ Nagano စီရင်စု Ida နည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းစက်မှုဌာန ၃ နှစ်မြောက်ကျောင်းသား ၈ ယောက်ဟာ၊ အဓိကသုတေသနအဖြစ် အမြင့်မှာရှိတဲ့မိုးပျံပူဖောင်းကနေ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့လေထုအပေါ်လွှာကို ရိုက်ကူးဖို့ စိန်ခေါ်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
လေတိုက်ခက်နေစဥ်မြင့်တက်သွားပြီး၊ နောက်ဆုံးမှာ မိုးပျံပူဖောင်းဟာ ပေါက်ကွဲသွားကာပြန်ပြုတ်ကျလာချိန်မှာ လေထီးဖွင့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်ပေါ် ပြန်ဆင်းလာမယ်လို့ အစီအစဥ်ဆွဲကြပြီး၊ လေစီးကြောင်းနဲ့အတူ Fukui စီရင်စုကနေ ပူဖောင်းကိုလွှတ်တင်လိုက်ပါတယ်။
ပူဖောင်းထဲမှာတော့ ဗွီဒီယိုကင်မရာနှင့်စမတ်ဖုန်းကိုထည့်ပြီး၊ GPS နဲ့ပြန်ရှာမယ်လို့ စီစဥ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။
ပူဖောင်းဟာအဆင်ပြေစွာပဲ ကောင်းကင်ပြာပေါ်တက်သွားပြီး၊ ခန့်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းလေစီးကြောင်းနဲ့လွှင့်ပါသွားပါတယ်။
ဘတ်ဂျက်နဲ့ လူအင်အားနည်းတာကြောင့် ရှာဖွေမှုအကွာအဝေးကိုကန့်သတ်လိုက်ပြီး၊ နောက်ဆုံးမှာဦးတည်ရာကိုမသိတဲ့အတိုင်း ဒီသုတေသနကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်။
၈ နှစ်ကြာပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် ၁၁ လပိုင်း ၇ ရက်နေ့ Saitama စီရင်စုရှိသစ်တောများကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကုမ္ပဏီက ပူဖောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားကာ၊ ရေးထားတဲ့လိပ်စာအတိုင်း တာဝန်ခံဆရာဆီဖုန်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
ပူဖောင်းဟာ အဆင်ပြေစွာမြင့်တက်သွားပြီးနောက် ပြန်ကျလာတဲ့အထိ ၂ နာရီ ၃၅ မိနစ်ခန့်သာကြာခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံးမြင့်တက်သွားတာက ၁ နာရီ ၄၁ မိနစ်နဲ့ ၁၂ စက္ကန့် …..
ခန့်မှန်းချေအမြင့် 32,000m ရှိတဲ့ကောင်းကင်ယံကနေ ပုံရိပ်တွေရိုက်ကူးမိပြီးနောက် ပူးဖောင်းပေါက်သွားပြီး မြေပြင်ပေါ် ပြန်ကျလာခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ..သူတို့တွေရဲ့သုတေသနက တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးဟာ ကိုယ်စီဘွဲ့တွေရနေကြပြီဖြစ်ပေမဲ့၊ သူတို့တွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်တဲ့ အာကာသကနေရိုက်ကူးမိတဲ့ပုံရိပ်တွေကတော့ အားလုံးကိုပီတိဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
လူသားတွေဟာ ကမ္ဘာမြေပြင်ကနေပျံတက်ပြီးအာကာသကိုသွားနိုင်မယ့်ခေတ် မကြာခင်ရောက်လာတော့မှာပဲမဟုတ်ပါသလား?
ဒီလို အိပ်မက်နောက်လိုက်တဲ့လူငယ်တွေဟာအရွယ်ရောက်လာပြီး၊ အာကာသဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားရင်း ဒီလုပ်ငန်းအား ပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမှာကို ရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်မျှော်မိပါတယ်။
တိုကျိုဟာ အာကာသယာဥ်များစုဝေးရာ အချက်အချာကျတဲ့လေဆိပ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မလား?
Japan Expo Media Press
Kagoshima စီရင်၊ Otake မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု တနင်္လာနေ့နံနက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့
အာကာသသို့ ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားဖြင့် သွားမည့်သူ
Ibaraki စီရင်စုတွင် ပြင်းအားအဆင့် ၄ ရှိငလျင်လှုပ်ခဲ့
ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်ပြီး မွေးဖွားလာတဲ့ Hello Kitty !!!
နှစ် ၈၀ ကြာပြီးနောက် အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်တောင်းပန်မှုနဲ့ သူ့ရဲ့အဓိပ္ပါယ် !!!!!
(၁၄) ရက်နေ့ တစ်နိုင်ငံလုံးကူးစက်မှု ၁၆၈၁ ဦးရှိပြီး၊ သေဆုံးသူ ၄၇ ဦးရှိ
အစေခံကဖေးပြီးတော့ အတူတူအိပ်လို့ရတဲ့ကဖေး ?
ဂျပန်နိုင်ငံက မြန်မာစာသင်ကြားပေးတဲ့ တက္ကသိုလ်
ဂျပန်-မြန်မာ ကပြားမလေး Asuka Saitō !!!
ဆာမူရိုင်းတွေသာ စားခွင့်မရှိခဲ့သော “ ငါး” ….!!!!
(၁၉) ရက်နေ့၊ သေဆုံးသူ ၁၀၄ ဦးရှိပြီး၊ တစ်နိုင်ငံလုံးကူးစက်မှု ၅၃၂၀ ဦးရှိ !!! (သေဆုံးမှု ပထမဆုံး ၁၀၀ ကျော်)
သင်မတွေ့ဖူးသေးသော ရှေးဂျပန်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ ရယ်စရာဓါတ်ပုံ ၁ ပုံ လူမှုကွန်ယက်တွင်ပျံ့နှံ့လျှက်ရှိ !!!!
ဟော့ကိုင်းဒိုးခရိုင် Kamishihoro မြို့ရှိ ရေကန်တွင် “ Ice bubble” လေးများပေါ်လာခဲ့
ဘူတာရုံဝန်ထမ်းထံမှ စာမေးပွဲဖြေမယ့်ကျောင်းသားများသို့ ဖြူစင်တဲ့သတင်းစကားတစ်ခု
၁၉ ရက်နေ့နံနက်တွင် နှင်းများကြောင့် Tohoku အမြန်လမ်းမ၌ ယာဥ်ဆင့်တိုက်မှုကြီးဖြစ်သွားခဲ့ !!!
မိုဘိုင်းဖုန်း chargers များကို ဂျပန်ရဲ့အများသုံးတယ်လီဖုန်းရုံများတွင် ထားပေးမည်။